Shahaadada bateriga ayaa muujineysa jiritaanka Samsung Galaxy Fold 2 | Androidsis
Xanta ku saabsan aaladaha cusub ayaa ah kuwa ugu caansan maanta. Waxay ku dhacday taleefannada gacanta ee aan la tirin karin ee bilawgoodu dhacay bilo ka dib, qaarkood xitaa ma sugin waqti aad u dheer, in kastoo tani ay noqon karto kiiskii ugu horreeyay tan iyo markii Galaxy Fold qaybtiisa ugu horreysay ay aad uga yaraa suuqa.
Baytariyada qaar ayaa dhigay alaarmiga Koofurta Kuuriya, oo ah dalka ay degan tahay shirkadda Samsung, oo hadda qiimeysa soo saarista taleefan leh shaashad laba jibaaran oo leh horumar badan marka la barbardhigo waxa lagu arko muraayadda noocyo badan oo cilado ah inkastoo kama dambaysta qiimaha in ka badan 2.000 oo euro. Unuggii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy laab 2 Waa 900 mAh, oo ka hooseysa labada ku rakiban Foldka, in kastoo ay dhici karto in kan kale uu ka sarreeyo 3.000 mAh si loo helo ismaamul ka ballaadhan maalinba maalinta ka dambaysa.
Magacyada baytariyada waa la yaqaan
El nambarka nambarka EB-BF701ABY Waa midka leh batteriga ugu yar maadaama shahaadada batroolka ee SafetyKorea ay awood u yeelatay inay ogaato, qaabka EB-BF700ABY ayaa ah kan ugu weyn, kaasoo aan wax war ah laga haynin xilligan lana ogaanayo Samsung inay door bidayso inay ku xirnaato baytariyada ka badan 4.000. Mah, waa wax macquul ah marka la bilaabayo mobilada dhamaadka-sare.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in naqshadda Galaxy Fold 2 ay noqon doonto nooca qolofta, aadna uga duwan Galaxy Fold, halka soo bandhigista ay tilmaameyso isla maalintaas Samsung Galaxy S11, oo kale oo ka mid ah boosteejooyinka ay faahfaahintooda ka soo baxayaan wax yar. wax yar oo daadis ah. Ha ahaato sida ay noqon kartoba, isticmaalaha ayaa si aad iyo aad ah uga warqabaya mudada uu taleefankiisa casriga ah xitaa ka sarreeyo processor-ka, RAM ama keydinta, macquul ahaan in saacado badan laga maqnaado guriga oo si joogto ah loo isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Caddaynta batteriga waxay muujineysaa jiritaanka Samsung Galaxy Fold 2
VLC waxaa loo cusbooneysiiyay 3.2.3 iyada oo lagu hagaajinayo isdhexgalka, ciyaaryahanka iyo kumbuyuutarrada gaaban ee loo yaqaan 'Chrome OS'